Manampy Antsika Avy amin'ny Unashamed Africa — Trip LEE - OFISIALY SITE
Amin'izao fotoana izao izany 12:34 Izaho ao Botsoana. Izany voalohany tany Afrika ny andro manontolo sy ny Tompo no efa any am-piasana. Vokatr'izay tantsambo manontolo niantsona tao Johannesburg tamin'ny alina Izy ka nanidina ny Botsoana androany maraina. Tsy tonga mba hihaona taonina ny mpanohana androany tolakandro tao amin'ny fanaovan-tsonia nataontsika amin'ny fivarotam-boky kristiana eo an-toerana ary nanana lehibe sasany tafa sy dinika. Rahampitso hariva no fampisehoana voalohany ny fitetezam-paritra ary isika amped.
Tena te izany fitetezam-paritra mba ho maro anaka ary ho tia ny fanampiana. Inona no azonao atao?
Tsy maintsy koa manampy antsika amin'ny alalan'ny vavaka, ka maro no ho hisaotra ho antsika noho ny fitahiana nomen'ny antsika ny alalan 'ny vavaky ny maro.
Mino mafy isika fa ny Tompo mampiasa ny vavaka ny olony mba hanatanteraka ny drafitra. Noho izany dia afaka manampy antsika amin'ny alalan'ny fivavahana. Ireto misy fomba fototra dia afaka mivavaka ho antsika ary miaraka amintsika:
1. Fa tian 'ny Tompo antsika salama sy matanjaka
2. Fa dia fihetsika ny tenantsika toy ny mpanompo
3. Fa ny fampisehoana dia hahita soa
4. Fa ny Tompo no hiaro ny fianakaviantsika isika rehefa lasa
5. Fa i Kristy dia hasandratra amin'izay rehetra ataontsika
Misaotra mialoha noho ny vavaka fam. Mila azy ireo
David Kamau • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:36 aho • navalin'i
cant miandry yall namely Kenya ny Zoma woooohooo!! prayn ho anareo azo antoka fa.
Eleanor Rigby • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:36 aho • navalin'i
andriakaky ô!! dia ho tia hisambotra anareo ry zalahy!! im vao manomboka mba hampidirana ny mozika ho fandaharana ny ankizy avy any Umthombo, Durban. Ankizy eny an-dalana izy ireo, fa izy ireo dia tahaka ny ankizy ara-dalàna miaraka amin'ny very fanantenana. Mila aingam-panahy, dia mila modely. Izy ireo dia liana amin'ny mozika, izao no manao izay rehetra tiany, mandihy sy mihira sy mihaino mozika, nevermind hafa rehetra ny zavatra mifoha ho, amin'ny Umthombo ny fanampian'i. Ny olana dia MTV toa ny hany zavatra mihira hiphop ka dia tratran'ny, Aho raha tena tia azy ireo ankizy afaka hihaino anao!!!
mailaka aho raha manana fotoana ao ny fandaharam-potoananao!!
Zahao hoe: http://www.umthombo.org/
Fotsiny aho dia tsy afaka mino ianareo ry zalahy any SA ary izaho ihany no nahita izany izao!
Andriamanitra no tena tsara!!
Lesco101 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:36 aho • navalin'i
aho hv hita Wat U ry zalahy manao,Azo antoka fa Kristianina U,Andriamanitra dia maro N hampitombo u.u hiala hahafantatra azy sy hanao izay hahafantarana Azy
Maureenwabs • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:37 aho • navalin'i
U tena nitondra ny lanitra nidina tany Nairobi…Tohina ny foko teny an-dalana fa tsy hoe fotsiny ry zalahy U mihira momba ny xtianity bt U miaina it.i mivavaka ho an'ny fitahiana Andriamanitra N fitia Ora lalana.
Agnes • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:37 aho • navalin'i
Dia tonga tamin'ny fampisehoana tamin'ny Alarobia in Gaborone Botsoana. Wow izay lehibe fampisehoana hianareo rehetra. Aingam-panahy ianao anay be. AHO unashamed. Mitady fatratra manana anao ry zalahy indray eto. Andriamanitra anie hitahy anao sy ho eo aminareo ny sisa amin'ny Unashamed Afrika fitetezam-paritra. Dia mivavaka ho anareo.
Lchinjala • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:37 aho • navalin'i
Izaho no malahelo NY MALAWI FAMPISEHOANA AM ao Shina…… Ry zalahy CHINE MILA amin'Andriamanitra…..
Jng • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:38 aho • navalin'i
Dope!!! Amazing Clip, Voninahitra anie Andriamanitra!! P.S. Aiza ny Pro amin'ny fampisehoana ity?
Nathan"JabbaBoy" voasazy • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:38 aho • navalin'i
miandry yall tao Johannesburg… Im antoka U nahita ny Tshirt sadying “IMPRAYINGFORYOU”
Svetlana • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:38 aho • navalin'i
Nangataka ho anao sy ny cant miandry ny handre ny fomba izany dia!!!!! Aoka ho azo antoka ka hiaro anao amin'ny fivavahako!!! Trip Lee no U comming rehefa niverina tany Charlotte indray manina enao antsapaka!!!!
Joe-seph • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:38 aho • navalin'i
Tompo Jesosy hiambina azy salama sy matanjaka,hijery ny fianakaviana raha mbola lavitra izy ireo,hampiasa azy ireo mba hanome voninahitra ny anarany masina,aoka ny kaonseritra handeha tsara ary mba ho feno ny fanatrehanao sy ny anie ny anaranao hiavonavonan'ny everything.Amen
Roxanne • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:39 aho • navalin'i
Antoka indrindra dia! Jereo anao amin'ny Cape Town tapany ny fampisehoana :)
Liam • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:39 aho • navalin'i
Nivavaka ny soso-kevitra vavaka. Na dia tsotra vavaka, Fantatro fa nihaino ahy!
Enga anie Jesosy hitahy, fampiononana sy hanome anao ny hery, hery sy ny fahatakaran-javatra.
Kenyseven • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:39 aho • navalin'i
mivavaka! Azo antoka indrindra!
Tylerbrabham • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:40 aho • navalin'i
Nangataka ho anao ry zalahy. TAHIN'ANDRIAMANITRA.
lilcj • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:40 aho • navalin'i
misy tompony no soa ho ahy be fotsiny fa ankehitriny dia te-hampiseho ny talentany ny olona, ​​ary aoka ny fantatro hoe iza i Jesoa no
Hrishidell • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:40 aho • navalin'i
Ny vavaka dia tsy hahay noho ny asa lehibe ianareo.
Ny vavaka dia ny asa lehibe kokoa. —- Oswald Chambers
QuintonTodd • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:41 aho • navalin'i
Ianareo rahalahy nahazo ny vavaka!!
Star Carmona • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:41 aho • navalin'i
vita! Izaho mangataka Jehovah no miambina anao, ny tsara fahasoavana!!!
Rebecca • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:41 aho • navalin'i
Misaotra be dia be noho ny fametrahana izany avy.
Foana aho te hahafantatra ny fomba azo nivavaka aho ho an'ny yall.